घुस लिन्न भन्ने प्रेमप्रसाद सञ्जेलको यस्तो पत्र किन ? – KhojPatrika
१४ साउन २०७८, बिहीबार
#पूर्व माओवादीका चार नेता
#अध्यक्ष रवि सिंहविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा
घुस लिन्न भन्ने प्रेमप्रसाद सञ्जेलको यस्तो पत्र किन ?
खोज पत्रिका सोमवार, २०७६ असार २, ११ :१० बजे
काठमाडौं २ असार । मोरङको बिराटनगर महानगरपालिकामा रहेको एक बोर्डिङ स्कुलकी शिक्षिकाले तलव र सुविधा नपाएको भन्दै बिराटनगरका बरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेमप्रसाद सन्जेलले एसईईको नतिजा रोक्न बिभिन्न निकायमा पत्राचार गरेका छन् । विराटनगर महानगरपालिका ८ की तुलसा पोखरेलले सुनसरी खनारस्थित सनसाइन इंग्लिस सेकेन्डरी स्कु्लबाट तलब र सुविधा नपाएको भन्दै सन्जेलले एसईईको नजिता समेत रोक्न पत्र लेखेका हुन । सो स्कुलबाट पोखरेलले एघार लाख पन्ध्र हजार आठ सय छयानब्बे रकम लिन बाँकी छ ।
जेठ ७ गते पाँच वटा निकायलाई लेखिएको पत्र प्राप्त भएको छ । एसईई नतिजा प्रकाशित हुने दिन नजिकिदै गर्दा सञ्जेलको यो पत्रले सनसाइन इंग्लिस सेकेन्डरी स्कुलका बिद्यार्थीमा चोट पु¥याएको छ । स्कुललाई कारवाही गर्ने अन्य माध्यम हुँदा हुँदै सञ्जेलले बिद्यार्थीको परीक्षाफल रोक्ने सम्मको निर्णय गरेको भन्दै आलोचना भएको छ ।
२३ वर्ष सेवा गरेकी पोखरेलको तलब सुविधाका बिषयमा बिद्यार्थीलाई किन मारमा पार्न खोजियो यो नै गम्भिर बिषय हो । हामी पोखरेलले तलव र सुविधा पाउनु हुन्न भन्ने पक्षमा हुदै होइन । आफनो पारिश्रमिक र सेवा सुविधा पाउनै पर्छ । तर, शिक्षक र स्कुलको बिबादमा बिद्यार्थीको भबिष्यमाथी कुनै पनि निकायले खेलवाड गर्न पाइदैन । नतिजा रोक्न गरिएको पत्राचार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई पनि बोधार्थ पठाइएको छ ।
ट्याग : #prem sanjela
एमालेमा ओली-नेपाल कहिले गरम त कहिले नरम, दुबै चाहन्छन् पार्टी…
हेलचेक्र्याईले निम्त्याउदैछ कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर, तयारी पनि पूरानै शैलीमा
काठमाडौं उपत्यकामा ५० वर्षभन्दा माथिकालाई भेरोसेल खोप लगाइँदै
थप ३,८४० जनामा कोरोना संक्रमण, ३३ जनाको मृत्यु, संक्रमणसँगै मृतकको…
हटाइएको चार महिनापछि सांसद पद माग्दै पूर्वमाओवादी नेता पुगे सर्बोच्च
किन उठाइदैछ संघियता र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रश्न,महेश,रविन्द्र र गोकुलले उठाएका सवाल
१एमालेमा ओली-नेपाल कहिले गरम त कहिले नरम, दुबै चाहन्छन् पार्टी एकता ?
२हेलचेक्र्याईले निम्त्याउदैछ कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर, तयारी पनि पूरानै शैलीमा
३काठमाडौं उपत्यकामा ५० वर्षभन्दा माथिकालाई भेरोसेल खोप लगाइँदै
४थप ३,८४० जनामा कोरोना संक्रमण, ३३ जनाको मृत्यु, संक्रमणसँगै मृतकको संख्या पनि बढ्दै
५हटाइएको चार महिनापछि सांसद पद माग्दै पूर्वमाओवादी नेता पुगे सर्बोच्च